आखिर के काम गरिन् एक दिनको मुख्यमन्त्री बनेकी १९ वर्षकी छात्राले ? | आखिर के काम गरिन् एक दिनको मुख्यमन्त्री बनेकी १९ वर्षकी छात्राले ? – हिपमत
३ बजे उनले बालिका निकेतनको निरीक्षण गरिन् र यहीँ बालिकाहरुसँग दिउँसोको खाना खाइन् । बेलुकी साढे ४ बजे उनी हरिद्वारको लागि प्रस्थान गरिन् । मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतले प्रदेशका बालिकाहरुलाई सशक्त बनाउनको लागि यो प्रयास गरिएको बताए । प्रदेशका बालिकाहरुमा प्रतिभाको कमी छैन र उनीहरु जस्तोसुकै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन यस्तो गरिएको रावतले बताए ।
सृष्टिले आफ्नो कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको बताउँदै बालिकाको शिक्षा, सुरक्षा र प्रदेशबाट मानिसहरु पलायन हुनु प्रदेशको मुख्य समस्या भएको बताइन् ।